युगसम्बाद साप्ताहिक - किन विकृत पारियो ऐतिहासिक संविधान ?
Monday, 02.17.2020, 11:44am (GMT+5.5) Home Contact
Tuesday, 09.20.2016, 02:26pm (GMT+5.5)
ऐतिहासिक संविधानसभाले जारी गरेको संविधान कार्यान्यनमा अनेक जटिलता छ । र त्योभन्दा बढी जटिलता बाहिरी र भित्री कारणले त्यो उत्पन्न भएको छ । त्यसपछि जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरूले देखाउन नसकेको दृढ इच्छाशक्ति पनि अर्को कारण हो । मुलुकको राजनीतिक इतिहासमै पहिलोपटक संविधानसभाले जारी गरेको संविधान एक वर्षभित्रै दुईपटक संशोधन हुँदैछ । संविधान जारी हुनुअघिदेखि चलेको मधेश आन्दोलन र त्यो आन्दोलनलाई साथ दिन भारतले पाँच महिना लगाएको अघोषित नाकाबन्दीपछि संविधानको विश्वसनीयता र उत्कृष्टतामा प्रश्न उठाउने काम भयो ।
संसारमा सर्वसम्मत कहीं पनि हुँदैन भन्ने मान्यता विपरीत नेपालको संविधानलाई सर्वसम्मत बनाउनुपर्ने दवाव भारतको रह्यो र नाकाबन्दी लगायो । तर यसले नेपाली जनतामा अभूतपूर्व रुपमा राष्ट्रिय जागरण पैदा गर्याे । मधेश आन्दोलन परिवर्तन भयो । अहिले उनीहरू कहिले संविधान संशोधन होला र सरकारमा जाऔंला भनेर जोखाना हेरेर बसिहेका छन् ।
संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले यसको अभ्यासका क्रममा उत्पन्न अबरोध हटाउन संशोधन गरिन्छ । तर हामीकहाँ ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधानको अभ्यास नै नहुँदै पहिलो संशोधन भयो भने अब अर्को संशोधनको तयारी भैरहेको छ । यो सब जिम्मेवार राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरूको गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति र स्वार्थका कारणले हो । संघीयता, अहिले सबभन्दा चर्को मुद्दा हो र यो कसैगरी मिल्ने देखिंदैन । मधेशवादीका माग सम्बोधन गर्न प्रदेश संख्या र सिमांकन हेरफेर गरे अर्को पक्ष आन्दोलित हुने निश्चितै छ । संविधान जारी हुनु अघि नै मध्यपश्चिममा मच्चिएको आन्दोलनन विस्मृतिमा छैन ।
संविधान संशोधन आवश्यकताको उपज हुने भए पनि यहाँ विदेशीको दवावले संशोधन हुँदैछ । यस्तोमा राजनीतिमा नलागे पनि चासो राख्ने युवाहरू अभ्यास नै नगरी किन संविधान संशोधन भन्ने प्रश्न उठाउँछन् । किनभनेन नेपालको संविधानले मधेशी, आदिवासी, जनजाति, महिलाको हक अधिकार खोसेको आरोप मित्थ्या हो भन्ने समयसंगै प्रमाणित भैसकेको छ । मुलुकमा महिला राष्ट्रपति, महिला प्रधान न्यायाधीश, महिला सभामुख जनजाति उपराष्ट्रपति नयाँ संविधानले नै दिएको छ । नेताहरूका राजनीतिक स्वार्थ अनुसार त संविधान बन्दैन र बनाउने पनि हैन । त्यसैले सरकारले दोस्रोपटक संविधान संशोधन गर्दा कुन कुन अधिकार थप्ने हो चासोको विषय छ । अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रको उच्च पदमा पुग्न पाउनुपर्ने प्रावधान राख्न खोजिएको त पक्कै हैन होला ?
महिला, आदिवासी जनजाती र मधेशीको हवला दिएर आन्दोलन, नाकाबन्दी र भारतले विश्वव्यापी अभियान चलाउन खोजे पनि निवर्तमान सरकारले त्यो दुष्कार्य चिर्न सफल भएको हो । भारतलाई झुकाएरै नाकाबन्दी खोल्न बाध्य पारेको हो । भारतभित्रै नेपालको संविधान भारतकोभन्दा उत्कृष्ट भएको टिप्पणी आउन थालेपछि परिस्थिति अर्कै बन्यो । नाकाबन्दी खुल्यो, मधेशवादीको आन्दोलनको धार मोडियो ।
जे भए पनि मुलुकमा जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान छ । त्यसैले जननिर्वाचित संविधानसभाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनाएको वर्षदिन पुग्दै गर्दा अब चाहिं विवादको गाँठो फुक्ला कि भन्ने अपेक्ष गर्नुको विकल्प छैन ।
एउटा यथार्थ के हो भने विश्वका कुनै पनि मुलुक एक प्रणालीबाट अर्काे शासन प्रणालीमा रुपान्तरण हुँदा पनि एकैपटक नभई क्रमशः भएका छन् । नेपालको प्रमुख विवाद संघीयता हो र दलीय समझदारी हुने हो भने सङ्घीयताका प्राबधान चाँडै जनस्तरमा अनुकूल हुने गरी कार्यान्वयनमा जान सक्नेछन् ।
अर्काेतिर, त्यसरी संविधान संशोधन नभएमा सङ्घीयतासहितको संविधानको कार्यान्वयनमा बाधा आउन सक्नेछ । त्यो बाधा विभिन्न तहको निर्वाचन गराउने सन्दर्भमै हुनेछ । संविधानबमोजिम २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ ।